Kedu ebe kachasị mma IT maka azụmaahịa m? | Martech Zone
Wenezde, August 7, 2013 Wenezde, August 7, 2013 Jenn Lisak Golding
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ichebe azụmahịa anyị na afọ dijitalụ bụ ịnwe ihe ngwọta, edozi IT ebe. Mana, olee nhọrọ kacha mma maka azụmaahịa gị? N'ikwu eziokwu, ọ dabere na azụmaahịa gị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ iku otu ndị otu IT, yana njikwa ole ịchọrọ ịchọrọ data gị. Maka otutu azụmaahịa, ajụjụ ndị a siri ike ịza.
Anyị N'ogbe colocation ahịa, Lifeline Data Centers, nọ na-ekwu maka uru dị na ngwọta IT dị iche iche, nke anyị nyeere aka ịghọ infographic. Ọ na-enyocha ihe, ebee, onye, ​​na ole maka azịza IT dị iche iche, gụnyere: igwe ojii nchịkọta, njikwa njikwa, ịchịkọta data na ụlọ.
N'agbanyeghị ụdị azịza ị họọrọ, nke a bụ ụfọdụ ụzọ dị mkpa ị ga-esi buru n'uche:
Mee ka ngwa gị dị oke mkpa duzie gị.
Oge dị elu na ntụkwasị obi siri ike inweta n'ime ụlọ azụ.
IT staffing vesos outsourcing bụ a ọsọ, ego, na àgwà nke.
Mee mgbakọ na mwepụ mgbe niile. Ihe dị mfe na-efu ego na ụgwọ ọnwa kwa ọnwa.
Kedu ka azụmahịa gị si echebe data gị ugbu a?